Somaliland News : Somaliland
Somaliland - Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ku baaqaysaa in la sii daayo 2 suxufi iyo dad mudaharaad loogu xidhay Sool iyo in xayiraadda laga qaado laba telefiishan
28kii May 2018 waxa lagu xidhay magaaladda Laascaanood ee gobolka Sool 57 qof oo ka qayb qaatay mudaharaad.
Madaxweyne Muse Bihi oo ka hadlay dagaalka Tuka Raq - Video
Somaliland - Amnesty oo ku baaqday in Boqor Buurmadow iyo Maxamed Kayse la sii daayo
Hay’adda Caalamiga ah ee Amnesty International ayaa maanta soo saartay qoraal ay ugu baaqayso dawladda Somaliland inay xorriyadooda u soo celiso Boqor Cismaan aw Muxumed Buurmadow iyo Maxamed Kayse Maxamuud.
Somaliland - Xarunta Daraasaadka Siyaasaddu waxaay ka codsanaysaa daladda SONSAF cadayn mawqifkeeda
Xarunta Daraasaadka Siyaasaddu (Centre for Policy Analysis) waxaay ka codsanaysaa daladda SONSAF inay kala cadayso mawqifkeeda ku saabsan amniga iyo shaqada difaacayaasha xuquuqal insaanka Somaliland.
Somaliland - Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay canbaaraynaysaa xukunka Boqor Buur madow
Maanta, 26th April 2018, Maxkamadda Gobolka Hargeysa oo uu gudoominayo garsoore Axmed Dalmar Ismaaciil waxaay shan sanadood oo xadhig ah ku xukuntay Boqor Cismaan aw Muxumued Buur madow oo ah hogaamiye dhaqameed caan ah.
Somaliland - Xarunta Xuquuqal Insaanka oo soo saartay war-bixin afar biloodle ah
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay maanta soo saartay war-bixin afar bilood leh ah oo ku saabsan xaaladda xuquuqal insaan ee Somaliland.
Somaliland- Hay'adda PENHA Oo Tababar U Qabatay Haweenka M Hargeysa - Video
Madaxweynaha Somaliland oo imaaraadka lagu soo dhoweeyey - Video
Somaliland - Madaxweyne Biixi oo Imaaraadka u Safray
(VOA) - Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa safar aan hore loo shaacin maanta ugu kicitamay dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta.
Wakiilada Somaliland Oo Ansixiyey Heshiiska Shirkada DP World - Video
Somaliland - sida loo dhisi doono dekedda Berbera - Video
Halkan ka daawo :
Boodhari Mill - Warshada daqiida oo dhowaan laga furidoono Hargeisa, Somaliland
(Hargeisa)- Bishan aynu ku jiro ee March ayaa 15 keeda laga furayaa magaalada Hargeisa ee caasimada Somaliland warshada daqiida samaysa.